Fanamarihana momba ny finday, ny smartwatches, ny takelaka, ny kojakoja, ny fampiharana, ny lalao, ... | Androidsis (Pejy 3)
Raha mitady terminal farany ambany misy batterie be ianao dia mandehana ireo fiheverana voalohany an'ny LG X Power, satria tsy handiso fanantenana anao izany.
Izahay dia mamakafaka ny Nomu S20, ny terminal vaovao an'i Nomu izay misongadina fa telefaona mahatohitra ny fahatairana sy ny fahalavoana, miaraka amin'ny fanamarinana IP68 ary ny vidiny mamaky tany.
Eto izahay dia mamela anao ny famerenana feno indrindra ny Xiaomi Redmi Note 4 amin'ny teny Espaniôla. Hevitra iray hanehoanay anao ny zava-drehetra, ny zava-drehetra ary ny zava-drehetra.
Notsapainay ny tobin'ny toetrandro Netatmo feno, fitaovana iray ahafahanao manjakazaka ara-toekarena ny tranonao amin'ny alàlan'ny fifehezana angona maro.
Huawei P9 Lite, famakafakana ny mpanjaka vaovaon'ny antonony
Fanadihadiana amin'ny teny espaniola an'ny Huawei P9 Lite, telefaona iray tena feno izay lasa safidy tsara indrindra handinihana eo afovoan'ny sehatra.
Androany amin'ity Review TV Box TX3 Pro ity dia mamakafaka fitaovana Android Android amin'ny Android M izay zara raha misy vidiny 30 euro izahay.
Android 7.1 Dev Preview dia azo alaina amin'ny Nexus 6P, 5X ary Pixel C
Android 7.1 Dev Preview dia azo alaina amin'ny Nexus 6P, 5X ary Pixel C miaraka amina andian-dahatsoratra vaovao toy ny apps hitsin-dàlana, sary masina boribory ...
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0, flash drive ho an'ny finday avo lenta na takelaka
Notsapainay ny SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0, flash drive ho an'ny telefaona Android na takelaka misy anao izay ahafahanao manitatra ny fahatsiarovanao ny fitaovanao
Eo am-pelatanantsika ny Wileyoks Spark X, telefaona iray miaraka amin'ny CyanogenMod 13 izay manolotra traikefa Android mahafinaritra amin'ny vidiny ambany.
Fanadihadiana momba ny fakantsary Netatmo Welcome, rafitra fanaraha-maso horonantsary ahafahanao manara-maso izay rehetra mitranga ao an-trano amin'ny findainao Android.
Fihetseham-po voalohany amin'ny Amazon Fire HD 8
Amazon Fire HD 8 dia takelaka tonga lafatra ho an'ny fianakaviana ary manaporofo izany ny tsipiriany sy ny vidiny. Raha mitady hanavao ny fitaovana toy izany ianao dia tonga lafatra
WTF?! Smart Stickers, manandrana ireo sticker vita amin'ny adhesive izay mamela anao hifikitra amin'ny findainao na amin'ny takelaka misy anao izahay
Manadihady WTF izahay?! Smart Stickers, sticker matevina mahaliana anao izay mamela anao hametaka ny telefaoninao amin'ny saika faritra rehetra tsy misy olana sy soa aman-tsara.
Huawei dia gaga tamin'ny fanolorany ny fianakaviana Nova vaovao nandritra ny fampisehoana azy tamin'ny fanontana farany an'ny IFA any Berlin….
Izahay dia mamakafaka ny Meizu Pro 6, telefaona tena feno iray izay hahagaga anao amin'ny famaranana premium sy ny kalitaon'ny fakantsary lehibe
Fiheverana voalohany an'ny LG X Cam
Ny LG X Cam, ankoatry ny sary misy fakantsary roa ao ambadika, dia aseho ho toy ny terminal voalanjalanja tsara amin'ny ankapobeny.
Ho amin'ity volana ity, ho tonga ny Android 7.1 Developer Preview miaraka amin'ny hitsin-dàlan'ny App, ny fanohanana ireo kisary boribory sy maro hafa
Amin'ity volana ity ny Android 7.1 Developer Preview dia ho hita amin'ny Nexus sy ny fitaovana mifanaraka aminy. Averinay jerena ny vaovao.
Avereno jerena ny UMI Plus ny faran'ny avo UMI amin'ny vidiny antonony
Androany, amin'ity fanadihadihana UMI Plus ity dia mamakafaka tsara ny terminal UMI avo lenta vaovao isika izay miakatra amin'ny vidin'ny midadasika na Android afovoany ambany kokoa aza.
Notsapainay tsara ny Xiaomi Redmi Note 3, ny antonony faran'izay betsaka indrindra amin'ny taona
Miverina izahay miaraka amin'ny famakafakana sy famerenana video an'ireo terminal Android avy any amin'ny firenena misy ny rindrin'i Shina lehibe, amin'ity ...
Google Assistant no axis central an'ny Google Allo, ilay fampiharana fandefasan-kafatra vaovao izay te-hiavaka amin'ny ambiny noho ny fahaizany amin'ny fanampiana virtoaly
Androany izahay dia mitondra aminao ny Review of the UMI MAX, mpisolo toerana ny UMI SUPER amin'ny vidiny izay mihoatra ny fanitsiana sy ny fifaninanana amin'ny misy azy ireo.
Notsapainay tsara ny UMi SUPER. Fanadihadiana momba ny finday avo lenta misy heriny mahavariana. Efijery 5,5-inch, RAM 4 GB ary ROM 32 GB.
Avereno jerena ny Leagoo M5, terminal Android 6.0 tsara amin'ny 60 Euros fotsiny
Androany izahay dia mitondra anao ny Review of the Leagoo M5, Android Marshmallow misy vatana vy, processeur tsara, efijery tsara ary mpamaky ny dian-tànana.
Manaova ati-doha! mamakafaka iray amin'ireo lalao piozila tsara indrindra ho an'ny Android izahay
Fanadihadiana feno momba ny Brain It On! iray amin'ireo lalao piozila tsara indrindra ho an'ny Android izay hahagaga anao amin'ireo mekanika fizika mahafinaritra
Fanadihadiana horonan-tsary momba ny EA Sports UFC, iray amin'ireo lalao miady tsara indrindra ho an'ny telefaona Android azonao sintonina maimaimpoana amin'ny Play Store.
Fantaro daholo ny garter mahafinaritra. Any Etazonia dia efa namorona ekipa basikety sy baolina kitra manokana ry zareo nandritra ny taona maro, ...
Famerenana ACER Liquid Zest 4G
Eto ianao manana ny famerenana an-tsary feno ny ACER Liquid Zest 4G, ilay faritra fidirana ACER vaovao hamaly ny filan'ny tanora mpihaino.
Izahay dia mamakafaka ny sofina an-tsofina Sudio Vasa Blá, sofina tsara kalitao miaraka amina endrika mahavariana izay mahatonga azy ho fitaovana lamaody.
Izahay dia mamakafaka amin'ny horonantsary Day R Survival, lalao velona miaraka amina zava-misy marina sy tantara tsy manam-paharoa. Tsy isalasalana fa ny lalao velona tsara indrindra ho an'ny Android
Moto G4 Plus, famakafakana ary hevitra aorian'ny fampiasana iray volana
Fanadihadiana horonan-tsary momba ny Moto G4 Plus, telefaona Motorola vaovao izay misongadina amin'ny fampitaovana matanjaka ao aminy, manasongadina ny efijery 5.5 "amin'ny vidiny mora: € 269
ZTE Axon Mini: famakafakana sy hevitra
Fandinihana horonantsary feno momba ny ZTE Axon Mini, fitaovana iray izay hahagaga anao amin'ny kalitaon'ny efijery, fitaovana matanjaka ary fakan-tsary feno
Famerenana ny Thieye i60 Action Camera, klone kalitaon'ny Go Pro Hero ho an'ny 70 Euros fotsiny
Androany izahay dia mitondra anao ny Review of the Thieye i60 Action Camera, fakantsary mihetsika mora vidy miaraka amin'ny firaketana horonantsary amin'ny fehezanteny 4K 25 isan-tsegondra.
TrackR Bravo, aza hadino ny very ny entanao manokana
Notsapainay ny TrackR Bravo, mpikaroka izay mitentina latsaky ny 21 euro ary hahafahanay mahita zavatra ao an-trano noho ny fampiharana Android
Avereno jerena ny Cubot H2 terminal Android LEHIBE amin'ny vidiny 140 Euros fotsiny
Androany izahay dia mamakafaka ho anao ny Cubot H2, Android Lollipop mahaliana sy atolotra miaraka amin'ny bateria lehibe, endrika tsara ary vidiny tsara kokoa.
Raha misy kalitao tsara ananan'ny sisin'ny Samsung Galaxy S7 dia tsy milentika na aiza na aiza izy. Io no telefaona lavorary ary angamba ny Android tsara indrindra
Android 7.0 Nougat Final Developer Preview Azo alaina izao; ny savaranonando ny famoahana azy
Ity no kinova farany ho an'ireo mpamorona Android 7.0 Nougat izay mety ho hitantsika amin'ny fomba ofisialy amin'ny faran'ny volana manaraka.
Avereno jerena ny VR BOX 2.0, nosedraina ny solomaso Virtual Reality lafo vidy indrindra izahay
Androany izahay dia mamakafaka ho anao amin'ity famerenana VR BOX 2.0 ity izay mety ho solomaso zava-misy virtoaly Low Cost tsara indrindra.
Famakafakana feno amin'ny famerenana video amin'ny teny Espaniôla an'ny Moto G4, ilay telefaona Motorola (Lenovo) vaovao, izay tsy ampoizina amin'ny fakantsary 5.5 "sy fahombiazany tena tsara
Manampy anao hitondra fiara tsara kokoa sy hitahiry vola amin'ny fiantoham-piaranao ny mpamily
Drivies dia rindrambaiko maimaimpoana ho an'ny Android izay hanampy anao ho mpamily tsara kokoa raha mitahiry vola be amin'ny fiantohana fiara ianao.
Ny Android N Developer Preview 4 dia efa misy ankehitriny, izay ahitanao ireo API amin'ny fanavaozana ny rindranasa rehetra ary amin'izay dia azony ampiasain'ny mpampiasa.
Fanadihadiana feno momba ny Moto X Force taorian'ny fampiasana azy nandritra ny telo volana; iray amin'ireo telefaona matanjaka sy mahatohitra mahery indrindra eny an-tsena.
Ny LG G5 dia finday avo lenta avo lenta izay dinihintsika lalindalina ary miavaka amin'ny andiana hatsarana toa ny fakantsary roa.
'The Lab' dia programa famerenana ifotony ho an'ny OnePlus 3
OnePlus dia mitady kandidà 30 handray OnePlus 3 ary hanao famerenana ny vokatra hanehoana hevitra hafa.
Fanadihadiana feno amin'ny teny espaniola amin'ny headphones RHA T20, ny sofina an-tsofina tsara indrindra an-tsena izay miavaka amin'ny famaranana sy ny feo avo lenta.
ZTE Axon Elite, famakafakana ary hevitra
Fanadihadiana feno momba ny ZTE Axon Elite, ny avo lenta vaovao avy any ZTE izay tonga any Espana mihazakazaka hahazoana toerana eo amin'ny tsena avo lenta.
Avereno jerena amin'ny teny Espaniola ny Vernee Thor, ny fahagagana amin'ny vanim-potoana ho an'ny Android midadasika / ambany
Anio dia avelanay ho anao ny Review amin'ny Espaniôla an'ny Vernee Thor mba hahitanao izay rehetra azon'ny Android atolotra anao manodidina ny 100 Euros an'ny RRP.
Namarana ny teny fototra i Google tamin'ny famoahana ny kinova fahatelo an'ny topi-maso ny mpamorona na Android Developer Preview 3.
Huawei Mate 8, fanadihadiana sy hevitra
Manome anao fanadihadiana feno momba ny Huawei Mate 8 izahay, phablet misy fampiasa, famolavolana ary fizakan-tena izay manandratra azy eo an-tampon'ny sehatra.
Androany izahay dia manome anao ny fandinihana feno ny Teclast X10 3G, Android Lollipop iray manontolo ary Tablet 3G ambanin'ny 100 euro.
Zopo Color S5.5, phablet tena mahaliana tsy latsaky ny 160 euro
Fanadihadiana amin'ny teny espaniola amin'ilay Zopo COlor S5.5 vaovao, ny phablet vaovao an'i Zopo izay miavaka amin'ny sandam-bola tsy mampino azy: latsaky ny 160 euro ny vidiny
Androany izahay dia nisedra tsara ny UMI Touch ka, raha mieritreritra ny hividy iray ianao dia afaka mahita azy io amin'ny tena fandehan-javatra ary manana hevitra mazava kokoa.
Notsapainay tsara ny Leagoo Shark 1, ilay terminal vaovao an'ny orinasa sinoa fanta-daza, izay mendrika hanasongadinana ny batterie 6300 mAh manaitra ary ny PVP tsy mampino.
Google dia namoaka ny Android N Preview 2 ho an'ny fitaovana Nexus
Google dia mandefa ny fijerena voalohany ny Android N izay hamahana ny bibikely ao anaty kinova izay mbola tsy milamina ary manaraka ny fanavaozana
Leagoo Alpha 2, manadihady ny iray amin'ireo finday Android mora vidy indrindra izahay
Fanadihadiana amin'ny teny Espaniôla an'ny Leagoo Alfa 2, telefaona fidirana vaovao ao amin'ny Leagoo izay misongadina amin'ny tontonana mikasika azy ao aoriana
Fanadihadiana Innos D6000, terminal lehibe misy batterie 6000 mAh
Androany izahay dia mitondra anao ny famakafakana ny Innos D6000, terminal eo anelanelany fa misy endri-javatra mahaliana kokoa ...
Notsapainay tsara ny ASUS Zenfone MAX, ny terminal lamaody amin'ny Android midadasika amin'ny vidiny ambany
Fanadihadiana feno momba ny ASUS Zenfone MAX, ny terminal lamaody nantsoina ho mpanjaka an'ny Android mid-range.
Huawei Watch, mamakafaka ny famantaranandro tsara indrindra amin'ny Android Wear izahay
Izahay dia mitondra anao fandinihana feno momba ny Huawei Watch, smartwatch izay nahatonga anay hanana fahatsapana tena tsara noho ny famolavolana sy ny fampiasa tsara
Miverina izahay miaraka amin'ny hevitra sy ny fanadihadiana lalindalina ny faran'ny sinoa niavian'ity HOMTOM HT7 PRO ity, na inona no mitovy, ny tsimbadika nohatsaraina amin'ny HOMTOM HT7 izay efa nahafinaritra anay ny mamakafaka eto amin'ny Androidsis ary nahatonga anay fahatsapana tena tsara.
Famerenana video sy fandalinana ny Weimei We Plus, ny terminal Android fiaviany Espaniola izay hahatonga anao ho tia tanteraka
famerenana lalina sy famakafakana ny headphones fanatanjahan-tena Beatit G18, headphone tsy misy sofina miaraka amin'ny haitao Bluetooth 4.1 ary bateria lithium-ion namboarina
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny HTC One A9, telefaona misy famaranana lehibe sy fiasa eo amin'ny haavon'ny afovoany ambony
Notsapainay ny Sony Xperia XA, terminal midadasika misy fakantsary tsara izay mahatratra ny tsena amin'ny vidiny 299 euro
Ny fanadihadiana amin'ny teny Espaniôla an'ny UMI Rome X ilay Phablet lamaody azontsika alaina amin'ny 60 euro fotsiny
indray ao amin'ny Lenovo Stand hilaza aminao ny fiheveranay voalohany momba ity fifandraisana voalohany amin'ny Lenovo Vibe P1 ity
Avy amin'ny Lenovo Stand dia nanandrana ny Lenovo A7010 izahay, terminal lehibe ahafahanay mampiditra ao anatin'ny elanelam-potoana Android amin'ny vidiny mifaninana tokoa.
Fihetseham-po voalohany tamin'ny sary rehefa avy nanandrana ny Samsung Galaxy S7 Edge, ny sainam-pirenena vaovao an'ny Samsung izay misongadina amin'ny tontolony miolaka miolaka
Avy amin'ny MWC16 any Barcelona dia avelanay ho anao ity horonantsary ity miaraka amin'ny fifandraisana voalohany amin'ny LG G5.
Avereno jerena sy famakafakana lalina ny Doogee Y200. Ny marina sy ny fahamarinana iray manontolo nefa tsy miafina na manambany teny.
Izahay dia manao fanadihadiana feno momba ny Samsung Gear S2, ny smartwatch voalohany miaraka amina boribory dial sy ny bezel mihodina avy any Samsung izay miavaka amin'ny fampiasana Tizen
Ny iray amin'ireo safidy mahaliana indrindra hanararaotana tanteraka ny mety ho takelaka dia ny fampidirana kitendry. ARY…
Manohy ny fanadihadihana horonantsary misy ireo terminal misy fiaviana sinoa izahay, amin'ity tranga ity miaraka amin'ny famakafakana sy famerenana video feno ...
Honor 7, manadihady ny telefaona antonony tsara indrindra izahay - avo latsaka ny 400 euro
Izahay dia mitondra anao fandinihana feno momba ny haingon-kaja vaovao Honor 7, Honor izay misongadina amin'ny famaranana kalitao sy ny fitaovana matanjaka
Androany amin'ity Review amin'ny Espaniôla an'ny Tablet Teclast X16 Pro ity dia mamakafaka terminal iray izahay izay manome anay ny vidiny tsy mampino mba hanananay ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa toa ny Android 5.1 Lollipop sy Windows 10.
Avereno jerena amin'ny teny espaniola ny HOMTOM HT7, 5,5 »ary Android Lollipop amin'ny vidiny 55 Euros fotsiny
Raha mieritreritra ianao fa ny 5,5 "Android Lollipop Smartphone amin'ny vidiny 55 Euros fotsiny dia tsy tokony ho tsara kalitao, tsy fantatrao ny HOMTOM HT7
Androany isika dia mamakafaka amin'ny antsipirihany ny Bluboo Uwatch, smartwatch bluetooth kalitao izay azontsika latsaky ny 30 Euros
Androany izahay dia mitondra ity famerenana horonantsary be dia be ity amin'ny teny Espaniôla amin'ny Moto X Style izay anehoanay anao amin'ny horonan-tsary mihoatra ny 26 minitra ny halavany, izay rehetra omen'ny terminal Motorola premium indrindra anay.
Androany izahay dia manome anao fandinihana feno momba ny zavatra tsy isalasalana fa iray amin'ireo terminal Android antonony tsara indrindra, ny maodelin'ny seramika Oneplus X.
Haier Iron Bluetooth, Smartwatch bluetooth tena misy eo amin'ny 40 euro fotsiny
Androany izahay dia manolotra ny Haier Iron Bluetooth, Smartwatch Bluetooth mora vidy miaraka amina sensor amin'ny tahan'ny fo mitambatra.
UE Boom 2, nosedrainay ireo mpandahateny tsy misy tariby tsara indrindra eny an-tsena
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fanandramana ny fanamafisam-peo UE Boom 2, taranaka vaovao misy ny fanamafisam-peo UE izay misongadina amin'ny fanoherana ny vovoka sy ny rano.
Androany izahay dia manolotra, mamakafaka ary manolotra ny takelaka Onda V919 AIR DualOS, takelaka manaitra amin'ny vidiny mihomehy.
Androany dia lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra momba ny Elephone M2, ny terminal eo anelanelany misy ny famaranana Premium indrindra amin'izao fotoana izao.
Bluboo XTouch, famakafakana ary famerenana amin'ny teny Espaniola
Androany izahay dia manome anao ny hevitra amin'ny teny Espaniôla an'ny Bluboo XTouch, terminal Android 5.1 manaitra miaraka amin'ny famaritana ara-teknika amin'ny haavon'ny Android avo lenta
Androany izahay mitondra anao ny famerenana amin'ny teny espaniola ny Xiaomi Hybrid Earphones vaovao, headphone Premium ary ny haitao manodidina ny hybrid manodidina ny 20 Euros.
RHA T10, famakafakana iray amin'ny telefaona an-tsofina tsara indrindra eny an-tsena
Androany izahay dia mamakafaka anao manontolo momba ny headphones RHA T10, ny sofina an-tsofina vaovao an-tsofin'i RHA miaraka amin'ny sandam-bola mahavariana
Androany dia atolotray anao ity famerenana feno ity amin'ny teny Espaniôla amin'ny HOMTOM HT6, ilay finday Android misy bateria lehibe indrindra amin'ny tsena ankehitriny.
Androany izahay dia mitondra anao ity famerenana feno ity amin'ny teny Espaniola izay hanazavana ny zava-drehetra sy momba ny Xiaomi Mi Band 1s
Androany, ho fanoherana, asehonay aminareo ny olan'ny Wi-Fi rehetra an'ny ZUK Z1, olana izay, tsy mbola voavaha na dia tamin'ny fanavaozana ofisialy farany nivoaka tamin'ny 11 Novambra aza.
Androany izahay mitondra anao ny fandinihana feno ny maodely iraisam-pirenena ZUK Z1.
Ireo loholon'ny trano na fianakaviana no afaka mahazo tombony betsaka amin'ity smartphone E-ZY A6 avy any Haier ity izay nohadihadianay.
Amin'ity fanadihadiana ity dia asehonay anao ny zavatra rehetra atolotry ny Doogee F5, Android Phablet manaitra amin'ny vidiny mihomehy.
Androany isika dia mamakafaka ny UMI EMax Mini, Android Lollipop misy famaritana ny Android midadasika amin'ny 130 euro fotsiny
Izahay dia nanana ny Nexus 5X teny an-tananay hanamarina ny kalitao izay sarobidy amin'ny masom-panahiny sy ny fomba fihetsiky ny rindrambaiko amin'ny fotoana iray.
Androany isika dia mamakafaka tsara ny terminal Xiaomi vaovao izay eo am-bavan'ny olona rehetra. Ny terminal dia tsy iza fa ny Xiaomi Mi4c, terminal Android manaitra amin'ny vidiny mihomehy.
Androany dia mampianatra anao izahay hanova ny bara fampandrenesana an'ny android ho an'ny manan-tsaina sy miasa kokoa.
Androany dia avelanay ho anao izao famerenana sy famakafakana feno an'ny INNJOO ONE 4G, terminal iray izay misongadina amin'ny famaranana manaitra sy kanto.
Amin'ity fanadihadiana feno sy famerenana horonantsary momba ny Xiaomi Redmi Note2 ity dia asehonay aminao ny fomba azo atao ny mitafy terminal goavambe amin'ny 150 euro fotsiny.
Izay rehetra atolotry ny Tablet Teclast X10 HD 3G ho antsika, DualBoot iray manontolo mihoatra ny 200 euro
Androany izahay manome anao famerenana sy famakafakana tanteraka ny Teclast X10 HD 3G Tablet miaraka amin'ny DualBoot Windows 8.1 sy ny Android 4.4.4 rafitra boot hankafizanao ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa.
Androany izahay manome anao ny famerenana sy ny famakafakana feno momba ny Leagoo Elite 1, terminal izay 160 Euros fotsiny dia manolotra antsika ny masontsivana ara-teknika amin'ny Android avo lenta.
Androany izahay mitondra anao ny famerenana sy ny famakafakana ny Hisense King Kong G610, terminal Android vaovao natomboka tamin'ity volana Jolay 2015 ity ary afaka mividy ao amin'ny Phone House izahay.
ZTE Axon Elite, fiheverana voalohany amin'ny horonan-tsary
Izahay dia mamakafaka ny ZTE Axon Elite amin'ny horonan-tsary, mampiseho anao ny tsiambaratelo rehetra amin'ny sainan'i ZTE vaovao.
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny Moto X Play vaovao
Famerenana sy famakafakana ny Moto X Play vaovao izay anehoanay anao ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ity terminal Motorola vaovao ity
Manao fampitahana tanteraka izahay eo anelanelan'ny Samsung Galaxy S6 edge + sy ny iPhone 6s Plus, titan roa vonona hiady hiakatra amin'ny seza fiandrianana,
Fampiharana hampiasa Fingerprint Lock amin'ny Android rehetra
Androany izahay dia mitondra ity famerenana sy fandalinana feno ity amin'ny teny Espaniola an'ny Oneplus 2, iray amin'ireo terminal Android andrasana indrindra amin'ny taona.
Androany izahay dia mitondra anao ny hevitra amin'ny teny Espaniôla amin'ny Iradish X9 Y6, klone iray amin'ny Apple Watch izay azontsika latsaky ny 30 Euros
Fampitahana Doogee Valencia 2 Y 100 Pro VS Doogee Nova Y 100X sy fitsapana haingana
Androany izahay mitondra anao ny fampitahana sy ny fitsapana hafainganam-pandeha Androidsis eo amin'ny Doogee Valencia Y 100 Pro VS Doogee Nova Y 100X
Honor 7, fahatsapana voalohany taorian'ny fampisehoana azy tany London
Ny Honor 7 dia efa natolotra. Ary izahay no nitondra ny fiheveranay voalohany anao taorian'ny fanandramana ny sainan'ny Honor vaovao. Halahelo azy ve ianao?
Fanadihadiana sy famerenana Review Doogee Nova Y 100X, terminal Android manaitra izay azontsika atao ambanin'ny 80 Euros.
Izahay dia nisedra ny Samsung Galaxy S6 Edge nandritra ny iray volana ary ireo no fehiny
Ireto fitaovana Nexus manaraka ireto dia afaka miditra amin'ny fampidinana Android M Developer Preview 3: Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 ary Nexus Player
Honor 6 Plus, phablet avo lenta tsy latsaky ny 400 euro
Androany izahay dia manafaka anao tanteraka ny Honor 6 Plus, phablet avo lenta vaovao izay kasain'i Honor hamaky ny tsena noho ny vidiny mirary: € 399
Fampitahana eo amin'ny Moto G3 VS Doogee Valencia 2 sy 100 Pro
Miatrika ny Moto G3 VS Doogee Valencia 2 sy 100 Pro izahay amin'ny fanjakan'ny Android mid-range ambany. Iza no handresy amin'ny ady?
Amin'ity Moto G 2015 Review ity dia mampianatra anao alohan'ny olon-kafa izay rehetra atolotray antsika amin'ity terminal Motorola vaovao ity izahay.
Rehefa avy nandramana tsara ny Tablet Cube I7 Remix OS aho dia ireo no fahatsapako tena marina.
Androany izahay dia manome anao ny fandinihana sy ny fandinihana horonantsary momba ny Doogee Valencia 2 Y 100 Pro vaovao, terminal izay nanjaka tamin'ny Android afovoany ambany kokoa.
Androany izahay manome anao ny Review sy ny famakafakana ny Xiaomi Yi Action Camera, fakantsary fakan-tsary na fakantsary fanatanjahan-tena miaraka amin'ny famaritana ara-teknika mitovy amin'ny GoPro Hero 3 azonay ambany noho ny 100 Euros.
Androany izahay dia manolotra ny famerenana sy famakafakana ny takelaka Cube I7 CX RemixOs miaraka amin'ny Android 4.4.4 Kit Kat sy ny Cube CDK01 magnet keyboard, singa miavaka amin'ny 200 Euros.
Androany izahay dia manome anao ny Review sy ny famakafakana tanteraka ny Ulefone Be Touch 2, Android terminal misy endri-javatra avo lenta amin'ny vidiny ambany Android.
Izahay dia manatanteraka ny famakafakana ny sisin'ny Samsung Galaxy S6, ny finday avo lenta matanjaka indrindra ary midika ho fiovana amin'ny fanontana taloha ny andiany S.
Doogee F3: famaritana sy fiasa
Te hahita ilay Doogee F3 vaovao va ianao?. Androany izahay dia manome anao ny famaritana rehetra, ny fahazoana ary ny vidin'ny fandefasana an'ity smartphone Doogee vaovao ity
Androany dia entinay anao ny famakafakana ny Lenovo K3 Note, Octa Core 64-bit iray manontolo, RAM 2 Gb ary efijery IPS FullHD izay azontsika vidiana 135 Euros fotsiny.
Inona no vaovao ao amin'ny Android M Developer Preview 2
Android M Developer Preview 2 dia natombok'i Google feno fampiasa vaovao maro izay lazainay aminao amin'ny antsipiriany.
Androany isika dia miatrika ny LG G2 VS LG G4 amin'ny fitsapana haingana Androidsis. Iza no handresy amin'ny duel franticidal?
Fitsapana hafainganam-pandeha Androidsis: Androany LG G3 VS LG G4
Fitsapana haingana izay iatrehantsika ny LG G3 VS LG G4
Notsapainay tsara ny LG G4, ilay terminal misy ny endrika tsara indrindra eo amin'ny tsena ankehitriny
Androany amin'ity Review ity dia mizaha toetra tsara ny LG G4 izahay hanome anao ny hevitray tena marina momba ahy manokana izay terminal Android tsara indrindra amin'izao fotoana izao, na amin'ny famolavolana izany, na amin'ny pitsopitsony teknika ary manampy amin'ny asa hafa.
Izahay dia manome anao fandinihana ny Huawei P8 Lite, ny firavaka vaovao an'i Huawei izay kasainy hanjakazakan'ny tsena afovoany. Hahomby ve izany?
Notsapainay ny headphones tsy misy tariby Olixar X2 Pro, headphone misy kalitao amin'ny 35,99 Euros ihany
Androany aho te-hanome toro-hevitra anao am-pahendrena miaraka amn teknolojia Bluetooth 4.0 sy NFC latsaky ny 36 Euro. Ny anaranao sy maodely Olixar X2 Pro ary azonay ampiasaina amin'ny alàlan'ny MobileFun.es
Honor 4X, famakafakana ny phablet Huawei vaovao
Manatanteraka fandinihana ny Honor 4X izahay, izay anehoanay ny tsiambaratelo rehetra momba ilay phablet Honor vaovao, terminal iray manana sandam-bola tsy voatanisa.
Androany izahay dia mamakafaka anao amin'ny headphones RHA MA750i, miaraka amin'ny famaranana tsara sy ny kalitaon'ny feo izay manandratra azy eo an-tampon'ny sakany
FC30 Pro, mamakafaka ilay lavitra vaovao izahay ho an'ireo tia ny Retro
Izahay dia mamakafaka ny Controller FC30 Pro, fitaovana mety tsara ho an'ireo tia ny Retro ary hahafahan'izy ireo mamelombelona ny voninahitra taloha amin'ny lalao video
Amin'ity fanadihadiana Xiaomi Mi4 ity dia asehonay anao ny hery sy ny fahalemena rehetra izay ho ahy no iray amin'ireo safidy fividianana tsara indrindra sy mahaliana ho an'ny terminal Android vaovao.
Izay rehetra omen'ny Android Wear 5.1.1 anay.
Androany, manararaotra ny fanavaozana ny LG G Watch ho an'ny Android Wear 5.1.1, dia mitondra horonan-tsary ho anao aho ary atoroko anao ny vaovao rehetra momba ity kinova Android Wear vaovao ity.
File Expert dia mpikaroka rakitra Root vaovao miaraka amina famolavolana Material Design miavaka izay efa azontsika andrana noho ny beta misokatra.
Androany dia manolotra ny Mooverang izahay, fampiharana tsotra sy tsy mampino izay hanampy anao hifehy ny kaontinao rehetra amin'ny rindrambaiko tokana.
Android M Preview dia azo alaina amin'ny fitaovana Nexus 5, 6 ary 9 manomboka anio ho toy ny sary any amin'ny orinasa.
Yaap Money, ilay fampiharana fandoavam-bola amin'ny finday izay lasa lamaody
Androany, rehefa afaka valo volana ny fisian'ny Yaap Money, dia manadihady ny isan'ny fampiharana ary koa milaza aminao ny vaovao lehibe antenaina amin'ity taona ity.
AparcaRadar dia rindranasa maimaimpoana ho an'ny Android izay ahafahantsika, ho toy ny rindranasa iarahan'ny mpampiasa, hitady sy hitatitra ireo toerana fijanonana malalaka malalaka izay matetika misy amin'ny tanàna lehibe any Espana.
WhatsApp vs Messenger: Iza no handresy amin'ny kalitaon'ny antso am-peo?
Ao amin'ny Androidsis dia miatrika ady amin'ny fampiharana na duel amin'ny fiantsoana feo amin'ny WhatsApp vs Messenger izahay. Iza araka ny eritreritrao no handresy amin'ny ady?
Microsoft Office Preview misy amin'ny takelaka Intel / x86
Microsoft Office Preview dia efa manana fanohanana amin'ireo takelaka misy ny maritrano Intel x86.
Manomeza voninahitra ny fandinihana 3C, izany no fiheveranay
Androany izahay manome anao famakafakana ny Honor 3C, Honor eo afovoany midina ambany noho ny 150 euro ary manana endri-javatra mihoatra ny ampy ho an'ny mpampiasa rehetra.
Avereno jerena ny Doogee Ibiza F2, ilay QuadCore 64-bit amin'ny $ 129,99 fotsiny
Eto izahay dia mamela anao ny famerenana feno ny Doogee Ibiza F2, ny terminal vaovao an'ny orinasa sinoa miaraka amina processeur QuadCore 64-bit ary RRP 125 euro fotsiny.
Androany izahay dia manolotra ny Review of the Kingszone Z1, ivontoerana 64-bit manontolo ary RAM roa GB ho an'ny $ 179,99 fotsiny.
Androany izahay mitondra anao ny fanadihadihana ny LG G Pad 10.1, takelaka Android manaitra izay misy fakan-tsary 10 "sy vahaolana HD izay azonay vidiana 189 euro fotsiny.
Androany izahay mitondra anao ny famerenana ny Moto G 4G hahafahanao mahita amin'ny fomba miasa ny zava-drehetra atolotray anay amin'ity kinova vaovao an'ny Moto G 2014 miaraka amin'ny fifandraisana LTE ity.
Marina Music Player, mpilalao mozika tsara iray hafa maimaimpoana tanteraka ary miaraka amina fampiasa maro
Ity ny fiheverako an'ity mpilalao mozika mahafinaritra ho an'ny Android antsoina hoe Marina Music Player ity.
Famerenana voalohany sy famakafakana ny Wiko Higway Pure, finday avo lenta manify indrindra manerantany.
Androany dia miaiky ny fangatahana telo tsara indrindra nataoko aho mba hiantsoana feo maimaim-poana amin'ny tambajotra.
Clash of Zombies II, ny lalao zombie amin'ny fomban'ny Clash of Clans
Clash of zombies II dia mitondra antsika ny lalao sy ny fomba filalaon'ny Clash of Clans, na dia mikendry indrindra ireo mpankafy ny fizarana Zombie aza izany.
Avereno jerena ny efijery Alcatel OneTouch Idol 3 an'ny 5'5 ″
Eto izahay dia mamela anao ny fanombanana sy famakafakana voalohany ny Alcatel OneTouch Idol 3 amin'ny 5'5 "natolotra tao amin'ny MWC15 any Barcelona.
Fampitahana voalohany eo amin'ny Apple Watch VS Moto 360
Famerenana ny Apple Watch, ilay famantaranandro Apple izay natolotra tamin'ny 10 martsa manerantany. Jereo ny antsipiriany sy ny fiasa amin'ity famantaranandro ity
Avereno jerena ny Alcatel OneTouch Idol 3, Android eo anelanelan'ny kalitao sy lafin-javatra tsara
Androany izahay mitondra anao ny Review sy ny famakafakana ny efijery Alcatel OneTouch Idol 3 an'ny 4,7 ", ny terminal misy ny masontsivana mitovy amin'ny Moto E ary miaraka amin'ireo fakantsary izay tsy hita farany.
Avereno jerena ny takelaka Lenovo Tab2 A10-70 ary 10 ″ amin'ny 199 Euros fotsiny
Eto izahay dia mamela anao ny fiheveranay voalohany aorian'ity fanadihadihana voalohany ny Lenovo Tab2 A10-70, Android Lollipop Tablet iray manontolo miaraka amin'ny processeur Quad Core 64-Bit ary 2 Gb Ram ho an'ny 199 euro fotsiny.
Asehonay anao amin'ny horonantsary ny Lenovo Tab2 A8, Phablet iray manontolo miaraka amin'ny Android Lollipop, mpanodina Mediatek quad-core ary efijery 8 "IPS miaraka amina vahaolana HD izay 99 euro fotsiny.
Izahay dia mamela anao amin'ity Asus ZenFone 2 Analysis ity sy ny fiheveranay voalohany momba ny tsara sy ny ratsy amin'ity terminal Android vaovao ity.
Mampiseho aminao izahay avy amin'ny MWC 2015, Lenovo Phablet manaitra, ny Lenovo Tab2 A7 / 30, izay hamidy any Espana amin'ny vidiny 79 fotsiny.
Asehonay anao ny filokana mety hanimba an'i Alcatel amin'ny resaka Smartwatches miaraka amin'ity Alcatel One Touch Watch ity, famantaranandro tsy misy Android Wear amin'ny vidiny 129 euro.
Notsapainay ny ZTE Blade S2015 Plus tao amin'ny MWC 6, phablet antonony izay tsy tokony hihoatra ny 350 euro. Ampy ve ny fahatsiarovana anatiny 8GB?
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny Honor 4X, phablet antonony misy fakantsary 13-megapixel ary 72-batterie fiainana.
Eto izahay dia mamela anao ny famerenana feno momba ny Lenovo S60, terminal izay mety mitentina mihoatra ny vidiny toa ny Moto E 2015 vaovao na dia manana toetra tsara kokoa toa ireo fakantsary mampitohy mahavariana aza.
Atorinay anao amin'ny horonan-tsary ny fomba mihetsika sy mamaly ny kinova vaovao an'ny interface Touchwiz nohavaozina an'ny Samsung Galaxy S6.
Mampiseho aminao ny LG Spirit amin'ny horonantsary avy amin'ny LG satnd ao amin'ny MWC 2015 any Barcelona izahay.
Izahay dia mamakafaka ny Honor 6, mpikambana vaovao ao amin'ny tandrefan'i Huawei any Eropa miaraka amina endri-javatra mahavariana amin'ny vidiny mora
Izahay dia mamakafaka ny Honor 6 Plus, sainam-pirenen'i Huawei vaovao Honor line ho an'ny tsena eropeana ary miavaka amin'ny fakantsary indroa mahery
Izahay dia mitondra anao fandinihana ny ZTE Spro 2, ilay tetikasa kely Android an'ny mpanamboatra Aziatika izay nahazo fandraisana tsara tao amin'ny MWC 2015
Mampiseho anao amin'ny horonantsary ny LG Watch Urban vaovao izahay, ny smartwatch LG izay miala amin'ny Android Wear ary mandositra miaraka amin'ny WebOS.
Ny fandalinana ny Samsung Gear VR Innovator Edition, gadget iray izay miaraka amin'ny Samsung Galaxy S6 / S6 Edge, dia mametraka antsika tanteraka amin'ny zava-misy virtoaly
Avy amin'ny MWC15 dia asehonay anao amin'ny horonantsary ny Lenovo Vibe Shot, na inona no mitovy, ilay fakantsary nihinana smartphone iray miaraka amin'ny rafitra fiasa Android 5.0.2 Lollipop.
Hatramin'ny MWC 2015 tany Barcelona dia nanandrana ny LG Magna izahay, ny terminal Android midadasika vaovao amin'ny vidiny mirary.
Hatramin'ny MWC 2015 natao tany Barcelona dia asehonay anao amin'ny horonantsary Sony Xperia M4 Aqua, Sony Octa Core iray manontolo latsaky ny 300 euro.
Hatramin'ny MWC 2015 dia notsapainay ny Sony Xperia E 4G, fantsona Sony farany ambany, namboarina tamin'ny plastika ary toa simba fotsiny ny fijerena azy.
MWC 2015: Notsapainay ny TalkBand B2 an'ny Huawei
Mbola eo amin'ny booth Huawei ao amin'ny MWC 2015 izahay amin'ity indray mitoraka ity, amin'ny fitsapana ny TalkBand B2 vaovao an'ny Huawei, fehin-tànana Wareable na manisa isa miaraka amina endrika kanto.
MWC 2015: Notsapainay ny Huawei MediaPad X2, Octa Core mahery an'i Huawei
Avy amin'ny Huawei Stand ao amin'ny MWC 2015 any Barcelona no nanandramana ny Huawei MediaPad X2, Octa Core Tablet mahery miaraka amina endrika miavaka.
MWC 2015: LG Leon natolotra tao Barcelona
Avy amin'ny MWC 2015 tany Barcelona izahay dia nanandrana ny LG Leon vaovao amin'ny horonantsary, terminal iray natao ho an'ny Android ambany, natao hiady amin'ny faritra Android ambany amin'ny Motorola Moto E 2015.
MWC 2015: fijerena horonantsary ny LG G Flex 2, ny terminal miolakolaka an'ny LG
Nanomboka tamin'ny MWC 2015 tany Barcelona dia nijery sary an-tsaina ny LG G Flex 2 isika, tsy isalasalana fa iray amin'ireo terminal mahaliana indrindra amin'ity MWC ity ary manintona ny CES taloha tany LAs Vegas.
Araka ny hitanao amin'ity horonantsary voatifitra teo amin'ny tranokala tao amin'ny MWC 2015 ity, asehonay anao ny mampiavaka roa ity fakantsary Samsung Galaxy S6 vaovao ity. tsy misy isalasalana fa iray amin'ireo tanjany.
Avy amin'ny MWC 2015 any Barcelona dia asehonay anao ny Samsung Galaxy S6 amin'ny horonan-tsary, ny sainam-pirenena farany an'ny firenen-pirenena Koreana eo an-tananao.
Androany izahay manome anao famakafakana horonantsary momba ny Samsung Galaxy S6 Edge, fitaovana voalohany eny an-tsena miaraka amin'ny tontonana roa miolaka. Mendrika handoavana bebe kokoa amin'izany ve?
Fampianarana video feno izay ampianarinay anao hampiasa Telegram Plus ho an'ny Android.
Eto aho dia avelako ho anao ity famakafakana feno ny Moto E 2015 ity, fantsona iray nantsoina hanjaka ny ampahan'ny Android ambany, izay mety ho an'ny antonony miaraka amin'ny famaritana ara-teknika ny infarction ho an'ny terminal fotsiny 129 euro.
Vexia Zippers Phone 5 famerenana: famerenana horonantsary, sary ary horonan-tsary
Fanadihadiana momba ny Zippers Phone 5 vaovao avy any Vexia, telefaona mahaliana miaraka amin'ny efijery 5-inch sy puce octa-core
Lalao mampiankin-doha ho an'ny Android: Androany, Pixelman Free
Pixelman Free dia iray amin'ireo lalao mampiankin-doha ho an'ny Android izay mandresy noho ny fahatsorany maivana indrindra amin'ny lalao ary miaraka mampiseho ny sary sary an-tsaina indrindra.
[Lahatsary] Fanadihadiana Woxter Zielo 400 ny Quad Core an'ny Woxter izay hahazo fanavaozana amin'ny Lollipop
Eto izahay dia mamela anao famakafakana feno momba ny Woxter Zielo 400, terminal Android midadasika ary azo havaozina amin'ny Android 5.0 Lollipop. Tsy latsaky ny 140 Euros no apetraka ao an-tranonao.
[Lahatsary] Nosedraina ny Atongm W008, ilay smartwatch, latsaka ny 70 Euros
Androany izahay mitondra ny famakafakana video an'ity smartwatch Atongm W008 manaitra ity, famantaranandro afaka miasa irery na mampifandray ny finday finday avo lenta ary afaka amin'ny antso sy feon-kira roa tonta.
Androany izahay dia manolotra sy manome soso-kevitra an'i SlideUp Lollipop Launcher, Android Launcher somary hafa miaraka amina konsep dock-style Windows 8 Tiles.
[Video] Banana Kong, mitsambikina, mitsambikina, manosika ary aza manadino akondro eny an-dalana
Banana Kong dia lalao amina sehatra mahafinaritra ho an'ny Android izay hametrahanay ny tenanay amin'ny kiraron'i Kong, gorila mahafinaritra izay manandrana mandositra ny avanan'akondro.
LG G Watch R, izao no fiheveranay
Izahay dia manadihady momba ny LG G Watch R, finday avo lenta an'ny mpamokatra Koreana miaraka amina valiny boribory sy famaranana avo lenta.
Androany dia manolotra iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra izahay hitantanana ny kaonty mailaka rehetra. Ny anaranao MailWise ary maimaim-poana.
[Video] Red Ball 4, lalao sehatra mahafinaritra ho an'ny Android
Androany aho te-hanolotra anao lalao an-tserasera mahafinaritra ho an'ny Android antsoina hoe Red Ball 4. Lalao mety ho an'ny fianakaviana iray manontolo izay hahatonga anay handany fotoana mampiala voly.
Notsapainay ny angovo Headphones BT9, ny headphones vaovao sy matanjaka avy amin'ny Energy Sistem
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nampahafantarinay anao ny fanombohana ny angovo Headphones BT9. Androany dia miresaka momba azy ireo indray isika satria efa nanandrana azy ireo.
Notsapainay tsara ny Doogee DG700 Titans 2, ilay terminal misy fanamarinana IP67 latsaky ny 120 Euros
Androany dia nosedrainay tsara ny Doogee DG700 Titans 2, telefaona rehetra misy IP67 vita vita amin'ny vy sy hoditra ary natokana ho an'ireo tia fanatanjahantena na asa heverina ho mafy.
Notsapainay tsara ny Doogee DG280 LEO, terminal Android antonony amin'ny vidiny Android ambany satria azontsika atao ny latsaky ny 80 euro any an-trano.
Eto aho mamela anao hanana hevitra vaovao momba ny tambajotra sosialy, antsoina hoe Dubsmash ary izany dia miompana manokana hamoronana dubbing video mampihomehy.
Eto izahay dia mamela anao handinika horonantsary feno momba ireo ROM Xiaomi ofisialy amin'ity MIUI V6 vaovao ity miaraka amin'ny Android 4.43.4 Kit Kat
Eto ianao dia manana famakafakana lalina momba ny Xiaomi RedMi Note 4G, angamba ny elanelam-potoana farany tsara indrindra amin'ny fotoana.
Androany dia holazainay aminao ny iray amin'ireo ebook farany izay nahavoa ny tsena. Momba ny Energy eReader Pro, boky elektronika natombok'i Energy Sistem.
Notsapainay ny NGS Odysea 500QHD, Quad Core ho an'ny VAT 129 euro tafiditra
Androany izahay dia manolotra ny NGS Odysea 500QHD, finday misy finday Android 4.4.2 Kit Kat miaraka amina quad-core MKT 6582M processeur ary RAM 1 Gb ho an'ny 129 Euros VAT ihany no tafiditra.
iPow 10000E avy amin'ny Walio Electronics dia Banky Power 10000 mAh izay manome antoka fa afaka mameno ny finday avo lenta na ny takelaka na aiza na aiza isika.
Google Play dia nanova ny politikany indray, mandrara ny tsikera amin'ny famaritana
Ny fitsipika vaovao an'ny Google Play dia nanova ny politika mandrara ny famerenana amin'ny famaritana, izay maneho fatiantoka ho an'ny mpamorona.
NES30 dia mpanara-maso izay maka tahaka ny valihazy NES malaza, console voalohany an'i Nintendo, miaraka amina famaranana sy kalitao tsy misy kilema.
Floating Toucher dia fampiharana mitsingevana manaitra ho an'ny Android izay mamela antsika hanao hetsika haingana amin'ny tsindry iray monja.
Androany no andefasako ny fanadihadihana ny fanampin'antoka, fanampiana manerantany ho an'ny fitaovana finday hatramin'ny 6 ", antsoina hoe Mount ary manome antsika ny sandan'ny vola tsara indrindra eny an-tsena.
Amin'ity lahatsoratra vaovao ity dia hitantsika ny famerenana HTC Desire 816, terminal Android manaitra izay hahagaga anao ny sandany vola.
MIP dia robot Android izay misongadina amin'ny fomba fandanjalanjana azy sy ho afaka fehezin'ny fampiharana avy amin'ny finday
Amin'ity famerenana vaovao ity dia mizaha toetra tsara ny Motorola Nexus 6 efa ela sy nandrasana izahay ary hanome anao ny fiheveranay voalohany.
Wire, ny fampiharana fandefasan-kafatra psychedelic indrindra indrindra ao amin'ny Play Store
Wire dia hevitra vaovao amin'ny rindranasan-kafatra fandefasana hafatra marobe, azo alaina ho an'ny iOS, oSX ary Android, manome hafatra sy fiantsoana feo maimaimpoana avy amina seha-pifandraisana ao an-tanàna izy.
Notsapainay ny SPC GLOW 9.7 Retina, takelaka mahatalanjona
Ny revolisionan'ny takelaka dia toy izany raha tsy noho ny serivisy antso izay ...
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android; Androany, Maps.Me Pro maimaimpoana ao amin'ny Play Store
Azonao atao izao ny misintona ny Maps.Me Pro maimaimpoana, ny fampiharana sarintany ivelan'ny Internet izay misy ny serivisy sy ny fivezivezena hatrany.
Ny lalao Android tsara indrindra; Androany, Mortadelo sy Filemón ny lalao video
Androany dia manomboka ny fizarana horonantsary amin'ny Androidsis ny lalao tsara indrindra ho an'ny Android miaraka amin'i Mortadelo sy Filemón ny lalao video.
AirL Lyrics; Mpandika hira miaraka amin'ny Android
Androany aho manolotra anao ity mpandika hira tsy mitombina ity ho an'ny Android. Fampiharana antsoina hoe AirL Lyrics ary afaka mahazo maimaimpoana tanteraka isika ao amin'ny Google Play Store
Androany izahay mitondra anao ny famerenana ny smartphone voalohany avy amin'ny orinasa Espaniola Gigatel, ny Capture G5 HD.